Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola laseBrazil U-Dani Alves Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele yeBhola yeBhola eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "U-El Loco [ohlakaniphile]". I-Dani yethu i-Al Alves Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF-Pitch Facts ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamandla akhe, kodwa bambalwa abheka uDani Alves Bio wethu othakazelisayo. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
UDani Alves Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UDaniel Alves da Silva wazalwa mhla ka-6th kaMeyi 1983 eJuazeiro, Bahia, eBrazil. Wazalelwa kunina, uDona Lucia (umama womuzi) nobaba, uDomingos Alves Da Silva (umlimi).
Uyise, uDomingos uchaza ukuthi lapho uDani eseyingane, wayesevele ehlukile kwezinye izingane endaweni yakubo. Wayegcwele amandla njengengane.
Kusukela esemncane, uDani wavuka noyise e-4 futhi wahamba naye epulazini ukuze amsize asebenze emasimini eSalitre, idolobha elisendaweni ye-30km kude neJuazeiro.
Ngesikhathi uDad Alves esencane kakhulu, wayehlale ethola isikhathi sokuthandwa kwakhe okukhulu, okudlala ibhola kanye nabangani bakhe emasimini. Udlale ibhola nezingane ezakhelene nazo. Ubaba ka-Alves wayenesithakazelo sebhola futhi ekugcineni wakwazi ukuhlela iqembu lakhe lebhola lebhola.
U-Alves, eneminyaka engu-10 ubudala, waqala njengengu-winger, kodwa ngenxa yokuntuleka kwemigomo ayifake, ubaba wakhe wabeka isikhundla sakhe emuva, isikhundla waqhubeka nokuphila. UDani osemncane wayala futhi wathengisa imikhiqizo yasemapulazini ukuze enze imali yokulondoloza umsebenzi wakhe osemusha eJuazeiro naseBahia. KwakunguSvilla owamnika ithuba lokudlala eYurophu. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
UDani Alves Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
UDinora Santana noDaniel Alves baqale ukuphola ngosuku olusha, ngo-1st January 2005.
Bobabili abathandi bezintandokazi banquma ukubopha ifindo ku-2008. Banezingane ezimbili, uDaniel noViória.
Umshado wabo wahlala iminyaka emithathu nje ngaphambi kokuba le mbhangqwana ivume ukuhlukaniswa nokuhlukaniswa ku-2011. Isizathu sangempela sokuhlukana kwabo kuze kube yimanje singasaziwa. Kodwa-ke, kwaqondwa ukuthi uDani Alves wathandana nomdlali weBrazil Soap uThaissa Carvalho. UCarvalho uvele eziningana zezinhlelo ze-TV yaseBrazil, futhi wafunda ukudla okunomsoco nokuhlengikaza eRio de Janeiro State University. Ngezansi isithombe sikaDani noThaissa.
Kusukela ngemuva kokuhlukana kwabo, uDinora Santana usalokhu ehlala e-Dani Alves ngisho nangemva kokuhlukana kwabo. Waqhubeka engumfazi ka-Dani Alves, owayengumabhizinisi, umakhelwane, udadewethu no-mama wezingane zakhe. I-Dinora ikhetha imicimbi, ilalela iziphakamiso zeqembu futhi inakekele nomyeni wayo wangaphambili lapho emele.
Ngempela, ingabe ubungavumela umkakho wangaphambili ukuba anakekele isithombe sakho? Kuthiwani ngokuphila kwakho kobuchwepheshe? Amadoda amaningi ayengase aqhaqheke lapho ecabanga ngalokhu kungenzeka. Ngokuba UDani Alves, kuvamile. UDani noDinorah Santana da Silva bangabalingani ezinkampanini ezinhlanu: ezimbili eBrazil, eyodwa kwezolimo kanye nenkampani eyodwa yokuhlala, kanti ezintathu eSpain (1) Enye "inkampani yendawo yokuhlala" (2) "Cedro Esport", ebuka isithombe somdlali, futhi (3) "Flash", inkampani ephethwe abagijimi). Futhi bangomakhelwane, bahlala emigwaqweni eseduze kakhulu, futhi yena, njengowomabhizinisi wesifazane oqaphele, uyaqaphela ukuthi ikhasimende lihlale lihle kakhulu.
"Ngihlale nginakekele ukudla, ikakhulu lapho emele. Ngicela ukuthi udla kahle yini, uma ephuza ubisi (ehleka). Ngingudadewethu omncane, umama oyingxenye "... .says Dinorah okuthiwa wangaphambili umfazi. NgeDoraora, isizathu esikhulu sokusondela kwakhe kumyeni wakhe wangaphambili akuyona izinkampani, kodwa izingane ezimbili: uDaniel noVictoria.
NgoJuni 2017, uDani Alves wanquma ukwenza isinqumo sokushada. Washada imodeli yaseSpain uJoana Sanz (iminyaka engu-10 wakhe omncane) emshadweni oyimfihlo e-Ibiza. UJoana Sanz uyimodeli yemfashini ngezobuchwepheshe. Kwakuwumcimbi wothando phakathi kwesiqhingi saseSpain, kanti lowo owayenguye uBarcelona emuva kokukhetha ukugqoka i-suit emhlophe ukuze afane nomlobokazi wakhe omuhle.
Umshado ka-Alves 'wawubanjwe ngokuhlakanipha ngangokunokwenzeka kodwa izivakashi ezimbalwa nomlobokazi babelane ngezithombe zomcimbi on Instagram.
UDani Alves Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
U-Dani Alves ekuqaleni wayevela emndenini ompofu ngaphambi kokuba umfana abekwe ithuba lokudlala ithuba lokuba ngumshintshi wezemidlalo. UDomingos Alves Da Silva usakhonza njengomqeqeshi eqenjini elivusa indodana yakhe.
UMnuz Domingos Alves da Silva, uyise kaDani Alves usanda kuqokwa njengoMphathi weBhola BaseClub, uJuazeiro Social Clube. Umndeni wakwa-Alves uziqhenya kakhulu ngekhanda labo, owamenza abe nesithakazelo ebhokisini futhi elandela iqembu lebhola lebhola laseBrazil kusukela ebusheni,
UDaniel Alves da Silva uthanda ukuhambisana nezikhathi zokuqeqesha iqembu laseBrazil eliseSalvador ngabalandeli abathandekayo abathathu: uMaria Lúcia, unina, uDomingos, uyise noLucivânia, udadewabo. Ngezansi isithombe somama kaDani Alves, uDona Lucia omthanda kakhulu.
UDani Alves Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
U-Dani Alves unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla kaDani Alves: UDani kumnandi ukuba abe, onokwethenjelwa, obekezelayo, osebenza kahle futhi oqinile.
U-Dani Alves Ubuthakathaka: UDani wayengase abe nenkani, azinakekele futhi ahlukumeze.
Yini uDanni Alves ayithandayo: Ukulima, ukupheka, umculo, ukuthandana nokusebenza ngezandla zakhe
Yini uDanni Alves ayithandi: Izinguquko ezingalindelekile, izinkinga nokungavikeleki kwanoma yiluphi uhlobo.
U-Dani Alves ungumuntu ozosebenza kanzima ukuvuna izithelo zomsebenzi wakhe. Uzizwa isidingo sokuthi ngaso sonke isikhathi sizungezwe uthando nobuhle, sibheke ezweni elibonakalayo, ukuxhaswa, nokuzijabulisa ngokwenyama. UDani unesidingo, uthinta futhi uthinta ukuthinta nokunambitheka njengento ebaluleke kakhulu kuzo zonke izinzwa.
UDani Alves Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Ama-Animated Facts
U-Dani Alves uyisibonelo sebaba odlala.
Njengoba uDani Alves ehilelekile kunoma yiliphi iqembu, amaDancing omdabu waseNingizimu Melika kufanele ayenze phakathi nemikhosi.
UDani Alves wakwenza lokhu kuConaldo.
UDani uveza nomlingani wakhe womdanso nomngani omkhulu, Neymar.
UDani Alves Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts -Uhleka ebusweni bukabuhlanga
Ngo-27 April 2014, ngesikhathi umdlalo wezemidlalo yaseVillarreal, u-El Madrigal, u-Alves uhlaselwe ngumsizi we-Villareal uDavid Campaya Lleo, owamphonsa ibhanana.
U-Alves wathatha leli bhanana, walihlanza futhi walithatha. Wasabela kulesi sigameko ngokuthi:
"Siye sabhekana nalesi sikhathi eSpain. Kufanele uthathe ngomthamo wokuhlekisa. Ngeke sishintshe izinto kalula. Uma ungakunikezi ukubaluleka, abafezi umgomo wabo. "
I-teammate NeymarImpendulo kaMasipala - ukuthumela isithombe sakhe emithonjeni yezokuxhumana kanye nokudla ibhanana - yahamba ngegciwane. Abanye abadlali bebhola bebelokhu bathathe izithombe zabo ngokwabo bedla ubhanana. U-Alves uthe noma ubani ophonsa ibhanana kuye kumele ahlazeke esidlangalaleni, kanti ngo-30 April 2014, kwaboshwa indoda mayelana nalesi sigameko. U-Villareal wabe esehlawuliswa i-12,000 kulesi sigameko.
U-Alves wayekade ehlukunyezwa eSpain. Ukhononda ngokuhlukunyezwa ngokobuhlanga ngemuva kokuhlaselwa yizingoma ze-monkey ngesikhathi sokugcina kweCopa del Rey e-Real Madrid ngo-2013.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iDan Alves Childhood Indaba yethu kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
Usuku olushintshiwe: Novemba 9, 2017